Sucuudiga Oo Ku Dhawaaqay Xabad Joojin Muddo Kooban Ah | Duul News International
Sucuudiga Oo Ku Dhawaaqay Xabad Joojin Muddo Kooban Ah	(Duulnews)-Isbeheysiga Sacuudiga uu hogaaminaayo ee duqeynta ku haya Xuutiyiinta Yaman, ayaa ku dhawaaqay inay salaasada xabad joojin bilaabi doonaan.
Xabad joojinta ayaa ku kooban shan maalmood, taas oo looga golleeyahay in la ogolaado sidii gargaar loo gaadhsiin lahaa dadka gudaha Yaman ku dhibaateysan.
Sacuudiga ayaa tilmaamay in duqeynta ay hakin doonaan maalinta Talaadada ah, laakiin macadda in mucaaradka dhankooda ay joojinayaan dagaalka.
Haddii aanay joojinin Xuutiyiinta, Sacuudiga waxa uu shaaciyay inaanay xabad joojinta sii jiri karin. Waxaana meesha ka bixi karto fursadda gargaarka lagu gaadhsiinnayo dadka ay gaajada ku hayso gudaha dalka Yaman.
Xoghaya arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa tilmaamay in xabad joojinta uu Sacuudiga ku dhawaaqay ay bilaabaneyso maalinta loogu talagalay.
Mr Kerry ayaa xaqiijiyay in arritan xabad joojinta ah ay ku tiirsan tahay sida ay Xuutiyiinta u aqbalaan.
Ka hadalka xabad joojinta ayaa timi, kaddib markii Sacuudiga iyo xalafadiisa ay xoojiyeen weerarada ay ku hayaan goobaha ay ku xoog badan yihiin Xuutiyiinta ee gobolka Sacda.
Sacuudiga ayaa dadka rayidka ah ee gobolkaasi deggan u sheegay inay isaga baxaan halkaasna ay tahay goob militari iyo furun dagaal.
Daawo: Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka Oo Khudbad Dhinacyo Badan Taabanaysa U Jeediyay Jaaliyadda Reer Somaliland Dalka Sweden